Archives des Vaovao - Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
“Mitsangana fa ataoko vavolombelon’ny zavatra efa hitanao ianao” (Asa 26, 16) Te hifampitantana aminareo indray aho mba hiaraka hanohy ny fivahinianana masina ara-panahy izay mitondra antsika mankany amin’ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora any...
Mankalaza jôbily telo sosona ny Faritra zezoita an’i Madagasikara. Hisy ny Eokaristia Masina ho fanakatonana ny taon-Jobily faha-50 taonan’ny Faritra zezoita an’i Madagasikara, ny faha-125 taona nahamartiry an’i Jacques Berthieu, ary fanokafana ny faha-500...
Manomboka androany 16 mey ary hifarana amin’ny talata 25 mey ny herinandro Laudato Si. Maro ireo hetsika nankalazana ny fahadimytaonan’ilay ansiklika navoakan’i Papa Fransoa. Fotoana ihany koa izao hisintomana lesona manoloana ny valan’aretina Covid-19...
Mgr Gabriel RANDRIANANTENAINA : nahazo eveka vaovao ny diosezin’i Tsiroanomandidy
Nahazo mpiandry ondry ny diosezin’i Tsiroanomandidy. Notendren’i Papa Fransoa hitarika io diosezy io Mgr Gabriel RANDRIANANTENAINA. Maro ireo andraikitra niantsorohany mialoha izao fanendrena izao. Mgr Gabriel RANDRIANANTENAINA : 24 taona naha-pretra Teraka ny 26 Febroary...